निबंध-विवरण: लेखन मा शैली र कठिनाई को विशिष्टता
निबंध-विवरण - यो एक पनि, भन्न सक्छ लिखित काम मानक प्रकार भन्दा साधारण को छ र। साथै, यो सबै को सजिलो हुन मानिन्छ।
त्यसैले, यो काम को दिल मा बोली कस्तो विवरण छ। आफ्नो लेखन किन एकदम सरल छ भन्ने छ। सबै पछि, विवरण, त्यहाँ कहानी केही तत्व हो, र तिनीहरू - हाम्रो कुराकानी अभिन्न भाग।
निबंध-विवरण यस जस्तै केहि सुनिन्छ कि प्रश्नको जवाफ: "? के" वा "के?"। र जवाफ यसलाई अनुसार शैली संग, एक विशेष तरिकामा आवश्यक छ। यो लेखक पनि वर्णनात्मक को विशेष महसुस गर्न सक्षम थियो आवश्यक छ बोलीको शैली। यसको विशेषताहरु के के हुन्? कुनै पनि निबंध-विवरण विवरण समावेश गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई मा - सम्पूर्ण बिन्दु। यो एक निबंध-वर्णन, कुरा, व्यक्ति वा घटना विषयको छ कि छैन भनेर - तपाईँले तिनीहरूलाई रोचक बताउन पर्छ। यो बिन्दुमा, यो एक कलाकार आफैलाई परिचय र शब्द चित्र रंग गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ। यो विशेष गरी पहिलो पटक यो गर्नेछु गर्नेहरूलाई विद्यार्थीहरूको लागि, सबै भन्दा कठिन सायद छ।
धेरै विद्यार्थी वाक्यांश "थप विवरण" शाब्दिक बुझ्ने। तिनीहरू केवल सबै गरेर बतान सुरु कारण यो, खराब छ। भने, उदाहरणका लागि, दिइएको थियो एक व्यक्ति एक निबंध-वर्णन, धेरै मानिसहरू यो जस्तै केहि लेख्न: "त्यो सुन्दर छ गोरा बाल, नीलो आँखा, expressive ओठ र भव्य नाक।"
Banal स्थानान्तरण लागि उपयुक्त छ tezisno योजना त एक निबंध लेख्न योजना जो, तर काम नै disclosed रूपमा विषय हुनुपर्छ वर्णन।
यो तदनुसार आकर्षित यदि एउटै वाक्यांश धेरै expressive खुवाउनुभयो गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि: "उनको उपस्थिति असामान्य छ: सुन्दर खैरो कपाल सुन सूर्य मा डाली थियो, अति गहिरो आँखा आँधी आकाश को रंग र शारीरिक रातो ओठ - उनको छवि पछि संसारको उत्कृष्ट नमूना हुनेछ जो आफ्नो चित्रकला, मा कलाकार प्रेरित गर्न सक्षम छ।" फरक स्पष्ट छ: अर्थ परिवर्तन छैन, तर वाक्यांश धेरै प्रभावकारी दायर भएको थियो। प्रसारित छ जो लेखक र पाठक को शैली प्रेरणा को एक अर्थमा - यस्तो प्रस्ताव आकांक्षा संग पढ्न चाहन्छु।
अनुपात को अर्थमा
लेखक अनुमति छ के को एक उपाय महसुस जो गर्न हदसम्म - धेरै महत्त्वपूर्ण छ। लेखन मा - विशेष गरी। निबंध-विवरण यद्यपि, र विस्तृत आवश्यक र विशेषण, तर आफ्नो प्रशस्त अनुमति छैन। अन्यथा पाठ यसको अर्थ गुमाउन थियो। यो बौद्धिक को तर्क र वर्णन संग सुन्दर वर्णनात्मक वाक्यांश संयोजन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। अन्यथा यो निबंध र कला मिथ्या, melodrama को शैली लेखिएको साहित्यको अलिकति समान छैन हुनेछ।
एक व्यक्ति कसरी वर्णन गर्ने?
एक व्यक्ति गर्न निबंध समर्पित छ भने (यो बाटो, र द्वारा, हुन सक्छ , साहित्यिक वर्ण) त्यसपछि विचार मात्र होइन यसको उपस्थिति, तर पनि वर्ण दिनुपर्छ। मुड, बानी, अनुहार अभिव्यक्ति, व्यवहार, पनि, यसलाई असर गर्न मनमोहक छ। एउटा सुन्दर उपस्थिति संग, उदाहरणका लागि, तर एक कुरूप प्राण - यो सबै छवि धेरै विवादास्पद छ, विशेष गरी यदि व्यक्ति एक थप पूरा तस्वीर सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।
ठूलो विषय - खैर। यो जस्तै केहि लेख्न सम्भव छ: "यो Expressive cheekbones, ओठ, नियमित आकार, फ्लैट नाक विश्वस्त स्मार्ट खैरो आँखा हेर्न सही मान्छे हो - यो जवान साँच्चै सुन्दर थियो, तर आफ्नो प्राण रूपमा यो जस्तो देखिने सिद्ध जवान मानिसको बाहिरी रूपमा सिद्ध थिएन ... बल्लतल्ल शालीनता जीवन, मान्छे, समाज को आफ्नो घृणा को मास्क अन्तर्गत लुकाइन्। अनि यो थप सुन्दर बनाउन भएन। "
बिल्कुल हरेक व्यक्ति आफ्नो आँखा अगाडि धेरै जवान मानिसहरू वा पहिले उल्लेख गरिएको थियो जो कि सिद्ध केटी, को छवि त्यहाँ पढेपछि। यो विधा को काम मा यो सबै विवरण विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र तिनीहरूलाई सानो होस्: उहाँले grins कसरी, वर्ण बारेमा केही वाक्य पनि उपस्थिति, को बानी बारे केही शब्द, को बारे मा थोडा - सबै पूर्ण-fledged सिर्जना मदत गर्न धेरै राम्रो छ , मौखिक पोर्ट्रेट कुराको लेखकलाई ड्राई स्पष्ट को एक सरल सिर्जनागर्दै भन्दा।
विधा "एक परिदृश्य निबंध" जस्तै अवस्थित छैन। तर, धेरै विद्यार्थीहरूले वन को एक निबंध-विवरण लेख्नुहोस् छ। वा seascape। सायद पहाड। कुनै पनि अवस्थामा, प्रकृति को विवरण - प्रत्येक विद्यार्थी काम गर्न आवश्यक छ काम जो मा। खैर, यो धेरै सजिलो भन्दा यो, उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति बताउन बनाउँछ।
यस मामला मा, पनि, विवरण, र बिना गर्न सक्नुहुन्न कलात्मक र expressive हालतमा। अर्को शब्दमा - सिद्धान्त मात्र यो मानिस र प्रकृति वर्णन गर्न आवश्यक छ नै छ। उदाहरणको लागि, seascape। सबै त चुप ... यहाँ हुँदा मानिस अनजानमा समय भनेर विश्वास गर्न सुरु गरिएको छ - "उज्यालो समीर, फिरोजा रूपमा प्राणपोषक नीलो, पानी असीम समुद्र बादल मडारिरहेको, ताजा हावा बाहिर सम्म stretching, बाहिर सुन्दर, बल्लतल्ल दूरी मा श्रव्य seagulls पुकारा अनुहार झटका रोकिएको छ। " यो वाक्यांश लेखक व्यक्त गर्न चाहन्छ के वर्णन गर्न एकदम उपयुक्त छ।
को पहिले उदाहरण देख्न सकिन्छ रूपमा, एक निबंध-विवरण आवश्यक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो विवरण छ। तिनीहरूले बस "ठीक शब्दहरू" जस्तै, ठिक्क हुनुपर्छ। अन्यथा निबंध विधा सुविधाहरू मेल हुनेछ किनभने तर आफ्नो उपस्थिति आवश्यक छ।
अन्तमा, भन्नुभयो गर्नुपर्छ, निष्कर्ष जस्तो हुनुपर्छ। यसलाई मा लेखक उहाँले भन्नुभयो थियो के आफ्नो मनोवृत्ति व्यक्त गर्नुपर्छ। र यो "मलाई लाग्छ ..." जस्तो देखिदैन। यदि हामी लेखक कामहरू व्यक्त गर्न यो ध्यानपूर्वक गर्न आवश्यक छ। विवरण सुन्दर युवा उदाहरण लिनुहोस्। यस विशेष चरित्र बारे आफ्नो कथा समाप्त कसरी सर्वश्रेष्ठ गर्न? तपाईंले यो जस्तै केहि लेख्न सके: "हामी तिनीहरू सिद्ध आकार र राम्रो कायम भव्य अनुहार अविश्वसनीय आँखा रंग वा विशिष्ट आवरण तोड्न असम्भव छ भनेर हुन सक्छ तर तिनीहरू खाली हुन सक्छ भित्र धेरै राम्रो मान्छे कमै मात्र छन् दुष्ट soulless, .... स्वार्थी। रूप महत्त्वपूर्ण छ, कुनै शंका। तर यो केवल उनको? ध्यान लायक छ ... "
यस प्रकारको खुला प्रश्न को एक निबंध प्रतिलिपि अधिकार द्वारा एक राम्रो कदम हो पूरा गर्नुहोस्। सामान्यतया, यस्तो EpiloguE vagueness एक छाप छोड्छ र पढाइ मनन गर्न मौका प्रदान गर्दछ।
कृषि भूमि - राज्य को एक रणनीतिक स्रोत
जीवित जगतले को मुख्य विशेषताहरु
Currant। शब्द र स्लाव भाषाहरु दन्त्यकथा को मूल
उपन्यास "यूजीन Onegin" मा प्रेमको विषय - निबंध
इङ्गल्याण्ड: रहस्यमय अल्बियन
लाउने तालिका - फर्नीचर को मुख्य महिला टुक्रा
"Nebilet": ग्राहक समीक्षा र दबाइ बारेमा डाक्टर। "Nebilet" निर्देश को आवेदन मा
को सौर्य प्रणाली मा ग्रह
Trampoline केन्द्र (साराटोभ): संगठन, सेवा र समीक्षा ठेगाना
मेष: विभिन्न पक्ष बाट राशिफल विशेषताहरु